सिंगापुरले दियो नेपाललाई १ सय ५२ रनको लक्ष्य, के नेपालले आज सिंगापुरलाई हराउँला ? – Nepali Profile
सिंगापुरले दियो नेपाललाई १ सय ५२ रनको लक्ष्य, के नेपालले आज सिंगापुरलाई हराउँला ?
काठमाडौं, १७ भदौं । एसिया कप छनोट अन्तर्गत चौथो खेलमा सिंगापुरले नेपाललाई जितको लागि १ सय ५२ रनको लक्ष्य दिएको छ । कप्तान चेतन सूर्यवंशीले ६० रन जोडेपछि सिंगापुरले ४२ ओभरमा सबै विकेट गुमाउँदै १ सय ५१ रनमा अलआउट भएको हो । टस जितेर ब्याटिङ रोजेको सिंगापुरका लागि अनिश परामले ३१ रनको योगदान दिए । नेपालका लागि स्पिनरद्वय सन्दीप लामिछाने र ललित नारायण राजवंशीले ३-३ विकेट लिए। सोमपाल कामिले २ र वसन्त रेग्मीले १ विकेट हात पारे ।
अघिल्ला दुई खेलमा पराजित भएपनि नेपालले शनिबार मलेसियालाई १९ पराजित गर्दै छनोटमा पहिलो जित निकाल्दै छनोटको फाइनल खेल्ने आशालाई जीवितै राखेको थियो । आइतबार सिंगापुरलाई पनि पराजित गर्दै छनोटको फाइनल खेल्ने सम्भावनालाई थप बलियो बनायने योजनामा हुनेछ । अघिल्ला तीनै खेल हारेको सिंगापुरविरुद्ध सहज जितको खोजीमा रहनेछ । नेपाल र सिंगापुर अहिलेसम्म पाँचपटक आमने सामने भएका छन् । सबै पाँच भेटमा नेपाल विजयी हुन सफल भएको छ
साफ च्याम्पिएन भए प्रत्येक खेलाडीलाई पाँच लाख दिने एन्फाको घोषणासेप्टेम्बर १२ मा एप्पलका तीन नयाँ आइफोन